ချစ်သော စံပါယ် – AnZarTone
သူ့ရနံ့က နှစ်သက်စဖွယ် …
သူ့စိတ်ရင်းက ဖြူစင်တယ် ….
သူ့ပွင့်ဖတ်က ယုယချင်စဖွယ် …
သူ့ကို နမ်းရှိုက်မိတော့တယ် …
အို .. ချစ်သော စံပါယ် ………………။
အရှေ့ အရပ်မှာ ကျင်လည်ကာ ကျက်စားနေတဲ့ နေမင်း၊ အနောက်အရောက်ကို ပြောင်းရွှေ့ကာ နေရာယူတဲ့အခါ ချစ်သူနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ပြောမယ့် စကားတွေကို စဉ်းစားရင်းနဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ ထမင်းစားဖို့တောင်မှ မေ့နေတတ်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့လုံးမှာလည်း အပျော်တွေက ပင့်မြှောက်ကာထားလို့ လူတစ်ကိုယ်လုံးလည်း မြောက်တက်နေသလားပါပဲ …။
ပန်းပွင့်လေးတို့ရဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပွင့်ဖတ်တွေ ဖွင့်ဟ၊ အလှတွေ ရုပ်လုံးကြွလာပုံကို စောင့်မျှော်ကာ မကြည့်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ အေးမြခြင်း သရုပ်ပြ လမင်းရဲ့ ဇာတ်ထုပ်အကကိုလည်း တခုတ်တရ စောင့်မျှော်ကာ အားမပေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လို့လည်း စံပါယ်ဆိုသူ ချစ်သူလာမယ့်လမ်း မရောက်ခင် ကတည်းက ကြိုတင်မှန်းလို့ လှမ်းခဲ့မိသူရယ်ပါ။ ဒီလိုပြောတော့ စံပါယ်က ပြုံးတယ်။ “ကို က စကားတတ်တယ်” … တဲ့။ နားဝင်ချိုရုံသက်သက် လုပ်ဇာတ်ခင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး ချစ်စံပါယ်။ ရင်တစ်ခုလုံးကို စုံကန်ပြီးမှ ထွက်လာခဲ့တဲ့ စကားတွေရယ်ပါ။ ဒီအခါ စံပါယ်က ဖွဖွလေးပြုံးလို့ ခွန်းတုံ့ဟတယ်။ “ကို တကယ်ချစ်တာ စံပါယ် သိပါတယ် ကိုရယ်” … တဲ့။
စံပါယ်လို့ တင်စား၊ ချစ်သူရဲ့ ထံပါး ကြည်နူးမှု အပြည့်နဲ့ ရောက်ရောက်သွားတတ်တယ်။ ချစ်တဲ့စံပါယ် … သူ့အပြုံးလေးတွေကလည်း အေးမြလွန်းတယ်။ ပြောရရင် စမ်းရေတောင် ရှုံးလောက်မယ် ထင်ပါရဲ့။ မိုးထက်က လမင်း အေးမြခြင်းဟာ မြင်စဉ်ခဏပါကွယ်၊ စံပါယ်အပြုံးက ဒီထက်ပိုတယ်။ အဲ့ဒီ အပြုံး လူတစ်ကိုယ်လုံးဖုံးလို့ တစ်ခါတစ်ခါ မိုးထက်မှာ ပျံဝဲနေသလားဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သံသယဝင်ခဲ့မိတယ်။ ဒီလို ပြောမိတော့ စံပါယ်က ရယ်တယ်။ “အပိုတွေပါ” … တဲ့။ သူ့ရီသံ ချိုချိုလေးတွေက နားထက်မှာ ဆည်းလည်းလေးတွေ ပွတ်တိုက်သွားသလို၊ အို .. တကယ့်ကို ကြည်နူးစရာ ရီသံသာလေးတွေပါပဲကွယ် ….။
ချစ်သူ အလှက ကြည့်လို့မရိုး၊ တစ်နေ့တစ်ခြား ပို၍တိုး ဆိုသလို စံပါယ်ရဲ့ အလှ၊ စံပါယ်ရဲ့ဟန် ဒီရင်ကို ဆူညံစေခဲ့ပေါ့။ ချစ်တယ်ဆိုတာကို ဆုပ်ကိုင်ပြလို့ မရပေမယ့်လည်း စံပါယ်အတွက် ရင်ထဲက လွင့်ထွက်လာတဲ့ စကားလုံးလေးတွေရှိတယ်။ “နွေဦးမှာ တွန်ကျူးတတ်တဲ့ ဥသြငှက်ငယ်လေးကိုလည်း ချစ်တယ်။ မိုးတွင်းမှာ ရွာသွန်းတတ်တဲ့ မိုးစက်ဖွဲဖွဲလေးတွေကိုလည်း ချစ်တယ်။ ဆောင်းဥတုရဲ့ သည်းညှာဦးဖြစ်တဲ့ မြူနှင်းဖွေးဖွေးလေးတွေကိုလည်း ချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့လည်း စံပါယ်ရယ်။ ဒါတွေအားလုံးထက် မင်းကို ပိုပြီးချစ်တယ်…။” ဒီလို ရွတ်ပြတော့ စံပါယ်က ပြုံးတယ်။ “ယုံပါတယ် ကိုရယ်” … တဲ့။
ကြိုလင့်တဲ့ ကမ်းလက်ကို နင်းတက်လို့ မသွားချင်ပါဘူး ချစ်စံပါယ်။ အဲ့ဒီ လက်လေးတွေကို ဖွဖွလေး ဆုပ်ကိုင်ပြီး ယုယမှုအပြည့်နဲ့ ရင်ငွေ့တွေ ကြားမှာ စံပါယ်ကို နွေးထွေးစေချင်သူရယ်ပါ။ တကယ်ပါ စံပါယ်ရယ်။ ခူးဖို့လည်း မရည်ရွယ်၊ ခြွေဖို့လည်း မစဉ်းစား၊ စံပါယ်ရဲ့အနား ရောက်လာခဲ့တဲ့သူပါ။ ရင်ခုန်သံ လှုပ်ရှား၊ စည်းချက် မြန်နေတဲ့ သံစဉ်များဟာ ချစ်ခြင်းရဲ့ နိမိတ်ပါဆိုရင် စံပါယ်ရယ် တိုးတိုးလေးကပ်ပြီးသာ နားထောင်ကြည့်ပါတော့ကွယ်။ ဒီလိုပြောတော့ စံပါယ်က ရင်ခွင်ကြား ငြင်သာစွာ တိုးဝင်လာတယ်။ ပြီးတော့ ပြောသေးတယ်။ “ဟုတ်တယ်၊ ရင်တွေ ခုန်နေတယ်” … တဲ့။
နေဝင်ဆည်းဆာရဲ့ အလှတရား၊ တိမ်တွေ လှပစွာ အရောင်တောက်နေလင့်ကစား ဒီအချိန်ကို ဖမ်းဆုပ်ထားဖို့ ဆုတောင်းနေမိတယ်။ အိပ်တန်းပြန် ငှက်ငယ်တွေကလည်း တစ်အုပ်ပြီး တစ်အုပ်၊ သို့ပေမယ့် အချိန်ကို ဘရိတ်အုပ်လို့ ထားချင်မိပြန်တယ်။ ခဏတာ တွေ့ရတဲ့ အချိန်ဟာ မြန်ဆန်လွန်အားကြီးနေတယ်။ ဒီလို တွေးမိတဲ့ အခိုက်မှာ စံပါယ်က သူ့လက်က နာရီလေးကို ကြည့်ပြီး ပြောတယ်။ “ပြန်ရတော့မယ် ကိုရယ်” … တဲ့။ သူ့ အသံလေးက တိုးလျလျ၊ ခိုးတွေ့ရတဲ့ တစ်ခဏဟာ အလိုမကျ စရာ။ “စံပါယ်ရယ် မခွဲချင်သေးဘူးကွယ်” …။
မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေမှာ အသုံးပြုတတ်တဲ့ ဝေါဟာရ …။ စကားလုံး တစ်လုံး။ ဒီစကားလုံးကို မနည်းကြိတ်မှိတ်ပြီးသာ မျိုချလိုက်ရတော့တယ်။ ဒါပေမယ့်လို့လည်း စံပါယ်ကိုတော့ ထွေးပွေ့ထားဆဲ။ စပါယ်ရဲ့ အသက်ရှူသံလေးတွေကို နှလုံးသားက ကြားနေရပါတယ်။ “စံပါယ်လည်း ဘယ်ခွဲချင်ပါ့မလဲ ကိုရယ်” .. တဲ့။ သူ့ရဲ့ အသက်ရှူသံလေးတွေကတစ်ဆင့် ပြောနေတဲ့ စကားတွေ နှလုံးသားက အတိုင်းသား ကြားနေရပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ခဏတာနဲ့ နောက်ဆုံး မိနစ်များမှာ စံပါယ်ရဲ့ ဦးခေါင်းထက်က ဆံနွယ်စလေးတွေကို ကြင်နာစွာ ပွတ်သပ်နေရင်းနဲ့ အနမ်းရဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်ဟာ စံပါယ်ရဲ့ ဆံနွယ်စတွေကြား ပွင့်လန်းလို့ သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ “သိပ်ချစ်တယ် စံပါယ်ရယ်” …။
This entry was posted in ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ and tagged စံပါယ်, အံစာတုံး. Bookmark the permalink.
← မြန်မာဂျာနယ် ဝက်ဘ်ဆိုက် အချို့
သဘာဝ ပုံလေးများ →
One thought on “ချစ်သော စံပါယ်”
စံပါယ်ဆိုပါလားစ် 🙂 နူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့ကောင်းပါတယ်